Iphrofayili yenkampani - iSiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
I-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. yasungulwa ngo-2008.
I-XY Tower ingomunye wabakhiqizi bombhoshongo wokudlulisa abasebenza ngobukhulu entshonalanga yeChina. Le nkampani ihlinzeka ngezinsimbi ezahlukahlukene zensimbi, ezikhethekile ku-500kV nangaphansi kwemibhoshongo yolayini wamandla, isakhiwo sesiteshi, isakhiwo sokuxhumana, isakhiwo sesitimela esisebenza ngogesi, njll.
I-XY Tower ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-33,000 futhi iphethe ulayini wokukhiqiza othomathikhi onamandla wokukhiqiza wonyaka ungamathani angama-30,000. Abaphathi beXY Tower banolwazi oluningi embonini kagesi. Imali engenayo yenkampani ingaphezu kwezigidi ezingama-20 zamadola, kanti imikhiqizo yenkampani isetshenziswe kabanzi yiChina.
I-XY Tower ingumhlinzeki ofanelekayo weNational Grid, iSouthern China Power Grid nezinkampani eziningi zikagesi ezidumile.
I-XY Tower ihlinzeka ngezinsizakalo kumakhulu amaklayenti awela izwe. Manje iXY Tower ithuthukisa imakethe yaphesheya ngokushesha. I-XY Tower ihlose ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo yobuchwepheshe kumakhasimende emhlabeni wonke. Ozakwethu beXY Tower sebevele bahlanganise iNingizimu Melika, i-Afrika, i-Southeast Asia njll.
I-XY Tower iyazibophezela ukuthi sihlala sihlinzeka ngosizo lobuchwepheshe kuwo wonke amaklayenti ethu. Sibheke phambili ukubambisana nawe.
Isakhiwo esisha sefektri nehhovisi siqala ukwakhiwa, ngemuva kwalokho, umthamo wokukhiqiza omkhulu uzodlula amathani angama-30,000 ngonyaka
Kwakhiwa isitshalo esisha esifuthwe ngokhuni
Indawo yesitshalo se-Hop dip lashukumisa ingaphezu kwe-12,000 m2
Kutholakale ibhizinisi elivelele ledolobha.
Imali engenayo yonyaka okokuqala idlula i-100,000,000 RMB
Irejista capital bhalisiwe sifinyelele 50,000,000RMB, Siwine inkontileka yokuqala emakethe yaphesheya (eSudan).
Okukhiphayo kwaminyaka yonke kuqala kufinyelele kumbhoshongo wamathani ayi-10,000
Ukukhiqizwa okusha kwakhiwe kwakhiwa Indawo entsha isungulwe ngaphezu kwama-30,000 m2 futhi inkulu kakhulu kunakuqala
ISichuan XiangYue tower Co., Ltd. Kutholwe kugxilwe embonini yensimbi yombhoshongo, kwakhiwa i-workshop kwaqala ukukhiqizwa umbhoshongo wolayini kagesi
I-Trading Company iwine inkontileka yokuqala yombhoshongo wolayini wokudlulisa
ISichuan XiangYue inkampani yokuhweba ngemishini kagesi yatholakala Ikakhulu ibhizinisi lalihweba i-transformer, izintambo nezintambo, i-line hardware njll.